Mangataka amin'ny miaramila amerikana i Haiti hiarovana ny fotodrafitrasa ataon'ny firenena
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Haiti » Mangataka amin'ny miaramila amerikana i Haiti hiarovana ny fotodrafitrasa ataon'ny firenena
Vaovao Mafana Haiti • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nangataka ny tafika amerikana i Haiti hiaro ny fotodrafitrasa misy ao amin'ny firenena
Ny fangatahana dia natao taorian'ny sekreteram-panjakana amerikana Tony Blinken sy ny filoha Joe Biden mihitsy no “nampanantena ny hanampy an'i Haiti” taorian'ny famonoana nataon'ny filoha tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity.
Ny mpitondra tenin'ny Pentagon dia nandà tsy hanome hevitra momba izany fangatahana izany.
Nalefa tany an-drenivohitra Haitiana ny masoivohon'ny federaly amerikana avy amin'ny FBI sy ny departemantan'ny Security Homeland mba hanampy "haingana araka izay tratra."
Ny "mpampihorohoro an-tanàn-dehibe" dia afaka mitrandraka fifanenjanana ankehitriny ary manao fanafihana hafa.
Ny minisitry ny fifidianana an'i Haiti Mathias Pierre dia nilaza fa nangataka an'i Etazonia i Haiti mba handefa ny tafika amerikana hanampy amin'ny fitoniana ny firenena sy hiaro ireo fotodrafitrasa tena lehibe toy ny tahirin-tsolika, seranam-piaramanidina ary seranan-tsambo ao anatin'ny korontana taorian'ny famonoana ny filoha Jovenel Moise.
Raha ny filazan'ny minisitra, ny fangatahana dia natao taorian'ny sekreteram-panjakana amerikana Tony Blinken sy ny filoham-pirenena Joe Biden mihitsy no “nampanantena ny hanampy an'i Haiti” taorian'ny famonoana nataon'ny filoha tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Nampitandrina izy fa ny "mpampihorohoro an-tanàn-dehibe" dia afaka mitrandraka ny fihenjanana misy ankehitriny ary manao fanafihana hafa.
Nangataka fanazavana momba ny fandefasan'ny Pentagon fanampiana ara-tafika ho an'ny firenena nosy Karaiba, ny mpitondra tenin'ny departemanta iray dia tsy nety nilaza.
Na dia nilaza aza ny mpitondratenin'ny Departemantam-panjakana amerikana Jalina Porter nandritra ny famelabelaran-kevitra nataony androany fa tsy afaka manamarina izy fa nisy ny fangatahana natao, ny sekretera an'ny gazety White House Jen Psaki kosa dia nanamarika fa halefa any amin'ny masoivoho federaly avy amin'ny FBI sy ny departemantan'ny Security Homeland. Renivohitra Haitiana hanampy "haingana araka izay tratra."
Maty voatifitry ny andiana basim-borona tao an-tranony akaikin'ny Port-au-Prince i Moise ny marainan'ny alarobia teo; ny vadiny koa naratra mafy ary nalefa tany amin'ny hopitaly tany Miami, Florida.
Na dia nisy tsipiriany vitsivitsy aza momba ny mpamono olona niseho, dia nanambara ny tompon'andraikitra Haitiana fa olona 28 farafahakeliny no ao ambadiky ny teti-dratsy, ao anatin'izany ny olom-pirenena 26 Kolombiana sy amerikana amerikana roa. Ny lehiben'ny polisim-pirenena Leon Charles dia nanamafy tamin'ny Alakamisy fa Kolombiana 15 sy amerikana roa no naiditra am-ponja vonjimaika, raha telo kosa no maty novonoin'ny polisy. Tamin'izany fotoana izany dia nilaza izy fa mbola misy ahiahiana valo hafa mbola afaka.
Rehefa mihombo ny tahotra ny korontana dia mijanona ao amin'ny “fanjakana fahirano” ofisialy i Haiti, miaraka amin'ny «curfews», ny fanidiana ny sisintany ary ny fanaraha-maso henjana kokoa napetraka manerana ny firenena, raha miaramila kosa nalefa tany amin'ny arabe. Ny kaomandy vonjy maika 15 andro dia hijanona hatramin'ny faran'ity volana ity.